Date My Pet » Nahoana Isika no Tokony Andramo miaraka amin'ny olona Tsy ny Type
Last nohavaozina: Feb. 23 2020 | 2 min namaky
Hatramin'izay fotoana izay ireo ny namany na ny fianakaviany, may ny mametraka anareo ny daty amin'ny olona fantany, manontany ahoana ny toetran'i ianao ho?
Saika ny olon-drehetra dia meloka izany-milaza fa manana karazana karazana ny mpiara-miasa na ny safidin'ny.
Reko ny olona miresaka momba izany ny fotoana rehetra: "Izaho ihany no daty zavakanto-karazany ny olona, ​​satria mpanakanto aho" na "Aleoko ny daty toy izany koa ny olona amin'ny tany ho toy ny tenako asa."
Ahoana anefa raha tazana trondro lehibe satria tsy mendrika ny "tonga lafatra type"?
Afaka mitranga matetika somary, indrindra amin'ny aterineto mampiaraka. Ianao manerana ny profil izay mahatratra ny masonao, fa rehefa avy namaky ny Syndicate anao handroso haingana satria tsy mifanaraka ny vady tonga lafatra lisitra. Toy izany ny karazana dia lava, hozatra fa ny mombamomba ny olona milaza fa 5'6 ihany ", ary somary liana ihany eo amin'ny fanatanjahan-tena na ny karazana dia Blonde, Eoropa Atsinanana ny vehivavy ary misy brunette Australian. Aza tonga dia manoratra olona eny satria tsy tonga dia toa ho lalao.
Nahoana ianao no mahatsapa ho mila hiaraka iray karazana olona manokana?
Tokony hanorina fifandraisana amin'ny olona mitovy zavatra tiana miorina, zavatra inoana sy ny tanjona. Raha mifantoka be loatra amin'ny fitadiavana olona mba hifanaraka torolalana manokana tianao hanaraka rehefa niaraka, afaka ho sabotaging ny vintana amin'ny mety fanorenana fifandraisana lehibe.
Rehefa mamela ny tenanao ihany no mba mampiaraka ny karazana, dia mety ho mamerina fotsiny lamina taloha. Raha efa mitondra ny datin 'ny mitovy karazana olona nandritra ny folo taona, ary tsy nisy ny fifandraisana efa niasa avy, angamba tokony handinika indray miaraka fotsiny ihany ny tiany karazana. Rehefa mampiaraka ny mitovy karazana olona hatrany, ny fifandraisana toy izany koa matetika no vokatra farany.
Niaraka voafaritra tsara dia mety ho lasa karazana aina sy mialoha. Miaraka amin'ny olona izay tsy ny karazany, olona hafa, Mety hamela anao fahafahana mba hanandrana zava-baovao sy hahazo ny fiainana vaovao traikefa. Raha manandrana miaraka amin'ny olona manana fialam-boly isan-karazany noho ny tenanao, ianao afaka ny hanandrana zavatra vaovao afaka tena tiako. Miaraka amin'ny olona avy amin'ny hafa noho ny ny lova afaka mamela anao mba hiaina sakafo sy kolontsaina vaovao.
Mba ho mazava, Te hilaza ve aho miezaka ny olona izay niaraka mizara mitovy kokoa anaty soatoavina fototra ho anao (toy ny azo itokisana, tsy mivadika na ny fahalalahan-tanana), raha oharina amin'ny fisafidianana ny hafa mifototra amin'ny anton-javatra ivelany (toy ny tarehy, foko na ny fiaraha-monina). Tokony hikambana amin'ny nanenjika mpiara-miasa mitovy soatoavina fototra toy izany koa. Raha te-ponenana teo amin'ny taona vitsivitsy amin'ny fianakaviana, tsy manomboka mampiaraka ny olona izay tsy manana fanirian-daza fatratra hanorina fianakaviana. Na izany aza, raha mahita olona izay mety tsy mifanaraka tsara ny mpiara-miasa ara-batana karazana, fa ianareo kosa nizara tanjona lavitra ezaka sy ny zavatra inoana, angamba tokony hanome azy ireo fahafahana.
Sady koa anie, ianao tsy fantatrao izay fotsiny ny mety ho lalao tanteraka.
Tsy mino aho aho no hividiananao ity Boky